ओपोको एफ११ प्रो नेपाल आयो | गृहपृष्ठ
Home बजार ओपोको एफ११ प्रो नेपाल आयो
on: १० बैशाख २०७६, मंगलवार ०७:१३ बजार
कम प्रकाशमा पनि उत्कृष्ट फोटो
काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले आफ्नो एफ सिरिज पोर्टफोलियोअन्तर्गत ओपो एफ११ प्रो सार्वजनिक गरेको छ । कम प्रकाश भएका स्थानमा समेत उत्कृष्ट तस्वीर खिच्ने क्षमता यो फोनमा छ । एफ११ प्रोमा ४८ एमपी अल्ट्रा–क्लियर क्यामेरा प्रणाली, राइजिङ क्यामेरा, पानोरामिक स्क्रिनको व्यवस्था छ । एफ११ प्रो थन्डर ब्ल्याक र अउरोरा ग्रीन गरी दुई चहकिला रङमा उपलब्ध छ ।
एफ११ प्रोका लागि आयोजित बृहत् सार्वजनिक समारोहमार्फत कम्पनीले एफ११ र एफ११ प्रो मार्भेल्स एभेन्जर्स लिमिटेड एडिशन पनि सार्वजनिक गरेको छ । एफ११ प्रोको मूल्य रू. ४७ हजार ९९०, एफ११को रू. ३७ हजार ९९० र एफ११ प्रो मार्भेल्स एभेन्जर्स लिमिटेड एडिशनको मूल्य रू. ४९ हजार ९९० निर्धारण गरिएको छ । यी सबै फोनका लागि अप्रिल २३ देखि २८ सम्म प्रि–अर्डर अवधि तोकिएको छ । सार्वजनिक सबै फोनहरू अप्रिल २९ देखि बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
सेल्फी एक्स्पर्टबाट ब्रिलियन्ट पोट्रेटतिर
एफ११ सिरिजले एफ सिरिजलाई थप नयाँ उचाइ र लोकप्रियता प्रदान गर्दै आफ्नो परिचय सेल्फी एक्स्पर्टबाट ब्रिलियन्ट पोट्रेटका रूपमा स्थापित गर्न कम्पनी अग्रसर देखिएको छ ।
ओपोको शक्तिशाली क्यामेरा प्रविधि सुसज्जित एफ११ र एफ११ प्रो दुवैमा एफ सिरिजअन्तर्गतको सर्वाधिक अत्याधुनिक क्यामेरा प्रणाली उपलब्ध छ । विशेष परिष्कृत रियर क्यामेरासहितका ओपो एफ११ र एफ११ प्रोमा अल्ट्रा–हाई स्ट्यान्डर्ड ४८एमपी+५एमपी डुअल रियर क्यामेरा प्रणाली जडान गरिएको छ । साथै पर्याप्त प्रकाशका लागि यसमा एफ १.७९ एपर्चर, बल बियरिङ क्लोज्ड लुप भीसीएम, ६पी लेन्स र १/२.३ इन्च इमेज सेन्सर्स पनि जडान गरिएका छन् ।